Carl-Henry-Gray-Suit-iyo-ChampaigneWaxaan bilaabay ganacsigeygii ugu horreeyay markii aan ahaa 12 sano - oo gudbinayey wargeysyada subixii hore iyo fiidkii 7 maalmood usbuucii, markasta oo wiilasha kale aysan imaanin waxaan fursad u helayaa sameynta 2 ama 3 warqado kale!
Ganacsigeyga labaad 'wuxuu bilaabay qiyaastii 13 sano jir wuxuu ahaa hagaajinta iyo iibinta mootooyinka, mootooyinka iyo mootada' wiilasha kale ee aan ku fuuli karno dhul si gaar ah loogu raaxeysto.
Waxaan sidoo kale ku soo biiray ciidamada Cadawga halkaas oo aan ku qaatay habeenkii 2 isbuuci todobaadyo ah iyo dhammaadyo usbuucyo ah; waxaynu ka barannay wax walba oo ku saabsan militariga, socodka, hubka, aadaabta iyo sida loola socodsiiyo nafteena si lebis ah. Tani waxay horseed u tahay in ay ka mid noqdaan ciidamada joogtada ah ka dib markay dugsiga ka tagaan.
Ka dib markii aan ka tegay ciidanka waxaan lahaa shaqo, taas oo ay ka mid yihiin iibinta hifi iyo qalabka isteerinka, taasi waa markii xiisihii aan u qabay muusikada ay ii horseeday shaqadaydii ugu horreysay oo ahayd goob-faneed DJ. Xilligii 4 bilood gudahood ee fursaddii ugu horreysay ee DJing waxaan noqday waqti buuxa oo iskiis u shaqeyste u ah DJ 1st July 1978 ee kooxda 'Coral Group' ee diskooga cusub ee magaalada, bilooyinkii 3 ka dib waxaan bilaabay ganacsigeyga labaad oo aan ka kireynayo diskooga iftiinka & qalabka dhawaaqa iyo taas oo ka shaqeysa hay'ad DJ hoteellada maxalliga ah.
Taasi waa sida aan ku bilaabay ganacsiga oo tan iyo markaa waxaan ku lug lahaa ugu yaraan warshadaha kala duwan ee 39.
Sanadihii la soo dhaafay wax badan ayaa la i weydiiyay "Hey Carl, maxaad nolosha ku sameysaa?" Jawaabahaygu waxbadan isbadaleen waqti badan! Tani waa qayb ahaan sababta oo ah weligeed ma jirin jawaab fudud oo sidoo kale waxay qaadan kartaa waqti dheer in jawaab sax ah la bixiyo (Riix halkan si aad u aragto fiidiyaha oo sharxaya wax walba). Waxaan had iyo jeer igu dhiirigelinayay inaan noqdo qof isku filan, fahma oo xakameeya waxkasta oo loo baahan yahay si arrimaha horay loogu maro aniga oo aan ku xirnayn dadka kale guusha aan gaaro ama guuldareysto.
Dib markii aan bilaabay, on 1st July 1978, gabi ahaanba diyaar uma ahayn nolosha ganacsiga, kaliya waxaan haystay wado aan ku helo nolol fiican iyo sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah - Weligey kamaan shaqo gelin waqti buuxa tan iyo markaas.
Xorriyaddu waxay la timaadaa qiimo aad u badan inkasta oo aadan waligaa hubin waxkasta, waxaad abuuri kartaa khayaali been ah haddii aad sameyso wax kugu filan oo kaa dhigaya inaad hesho lacag kugu filan oo aad ku kasbato ama aad ku barwaaqowdo - laakiin sidii aan marar badan la soo maray, waxkastoo aad leedahay waa la geyn karaa ama lagu burburin karaa waqti aad u gaaban. Tan macnaheedu maahan inay tahay cadaw caan ah ama cadow. Waxay noqon kartaa munaasabad qaran ama mid caalami ah, siyaasiyiintu waxay male awaal xun ka bixiyaan habka loo maamulo dalka iyo nasiib xumo fudud. Khasaaraha suurta galka ah ayaa ah meel kasta sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso waxyaabaha muhiimka ah ee kugu dhicikarta kugu yeelan kara isla markaana leh qorshayaal dhowr ah oo gadaal u dhaca, kiis-kiis!
Dadka intooda badani waxay arkeen oo keliya qayb yar oo ka mid ah waxqabadyadayda, sidaa darteed waxay u eg yihiin inay igu dhiirrigeliyaan "in aan diiradda saaro" ama "ku dhegaan hal shay", Waan ogahay in marka loo eego aragtidoodu xaddidan tahay, baraarug la’aanta ganacsiga buuxa iyo fahamka fahamka geeddi-socodka go'aan qaadashadeedu macno buuxda ayey ku leedahay iyaga - laakiin waxaan la socdaa fursado badan, fursado iyo duruufo suurtagal ah oo ka jira hawlahayga baaxadda weyn iyo is-dhexgalka ganacsiga; Waxaan si weyn ugu cadeeyay hormarinta fikradeyda ganacsi.
Natiijooyin badan oo guuleysta waxay ka yimaadaan falalka gebi ahaan looga hortago, ma ahan wax sax ah waqtiga oo dhan laakiin waa inaan noqdaa waqtiyo sax ah oo aan ka khaldanahay inaan ku guuleysto. Waa run in ficilku u horseedi karo dhibaatooyin, dhibaatooyinku waxay ku siinayaan waayo-aragnimo iyo waayo-aragnimo waxay kuu horseedaa guul (haddii aad dhageysatid).
Ma ahayn jid toosan oo lagu gaadho guusha iyo xitaa maanta ma aqbalayo in aan gaadhay heerka ugu sarreeya ee karaankayga, marka loo eego qaddarka saafiga ah ama guud ahaan guulaha aan gaadhay - waxa aan ka baqayaa in maalinta ugu dambaysa ee aan dhulka haysto aan lahaan doono Hal shaqo oo dheeri ah in la sameeyo ”.
Gabi ahaanba waan caaqil ahay markaan bilaabay ganacsiga maxaa yeelay waxaan seegay waxii ugu horreeyay ee 12 sano ee waayo-aragnimada caruurnimada caadiga ah, halkaas oo qofku ku barto xirfadaha kala-gaarka ah, is-dhexgalka kuwa kale iwm Tani waa sababta oo ah waxaan ku noolaa nolol go'doonsan oo ku taal woqooyiga Afrika ee 19Km ka baxsan magaalo deked yar - markii aan ku soo noqday Boqortooyada Ingiriiska markii aan jiray 12 sano waxay ahayd wakhti jahwareer igu kalifay inaan xiiseeyo inaan barto qaababka nolosha & nolosha. Tani waxay iga dhigtay inaan wax ku barto xawaare aad uga dhaqsi badan kooxdayda asxaabta ah ee aan si dhaqso leh uga guuleysto, ugu yaraan dhanka tixraackeyga sababtoo ah danaynayaan waxyaabaha aan ahaa iyo fiisaha!
Tan iyo 1972 waxaan bartay 100's buugaag ah dhammaan dhinacyada nolosha & ganacsiga, sidoo kale tan iyo markii internetku runtii ka baxay 1998 waxaan sii waday cilmi-baaris heersare ah oo ku saabsan dariiqa adduunka iyo khabiir ku ah dhismaha ganacsiga internetka. Waxaan had iyo jeer jeclaan lahaa inaan la wadaago wixii daahfurka ah ee qof kasta oo caawimaad u baahan maxaa yeelay waxaan ogahay waaya-aragnimada-gacanta koowaad sida kelinimada iyo adkaanta ay tahay inaan isku dayo barashada tijaabada iyo qaladka, sidoo kale waxaan isku dayayaa inaan wax walba keligiis ku baxo waqti badan ayey qaadataa naftu waa burburin kartaa.
"Waxaan rabaa inaan caawiyo inta ugu badan ee suuragalka ah si ay u gaaraan awooddooda"
Waxaan u malaynayaa adduunka dibadiisa waxaan ku noolaa nolol ka sareysa celcelis ahaan tayo sare tan iyo dabayaaqadii 20's, oo waxaan haystaa wax badan oo aan ugu mahadnaqayo - Waxaan ku noolaa Monaco iyo Cote d'Azur ilaa sannaddii 2000 waxaanan haystaa milyaneer aad u badan xitaa dhowr bilyan oo saaxiibo ah. Waxaan kale oo aan leeyahay ururro leh Royalty iyada oo loo sii marayo kooxo iyo ururro aan taageersanahay taas oo xiiso leh - oo aan ku daro boqolaal xiriir farxad leh la leh dadka shaqeeya ee joogtada ah kuwaas oo bixiya adeegyo nolol-maalmeedka aan u baahanahay si aan uga dhigno adduunkayagu inay shaqeeyaan, aniga dhammaan ayay u wada siman yihiin qiimo leh.
Waxaan aaminsanahay awooda qosolka iyo lahaanshaha
inta ugu badan ee madadaalo iyo xorriyadda intii suurtagal ah.
Natiijada meheraddayda ganacsi illaa hadda waa "Carl Henry Global" halkaas oo aan ku abaabulo waxqabadyadayda hoos timaadda cinwaannada ugu waaweyn ee 5; Maaliyadda, Hantida (Hantida), Internetka (Suuqgeynta Khadka Tooska ah), Shirkadda iyo Shakhsi ahaaneed & Nolol - Waxaan u adeegsadaa cinwaanadaas si aan u habeeyo labadaba ganacsi iyo noloshayda shakhsiyeed. Waxaan u arkaa inay ku caawinayso in aan haysto “santuuqyada” si aan u galiyo fikradayda iyo qorshahayga oo dhan. Ka akhriso inbadan oo ku saabsan bogga "Naga saabsan" ...,
Tan iyo 1998 waxaan u isticmaalay internetka sida ugu macquulsan ugana shaqeeyo hawlahayga ganacsiga si aan u yareeyo cabirka qaab dhismeedka ganacsigeyga. Tani waa markii aan la imid "CAD-Q" (Isgaarsiinta, Automation, faafinta iyo Aqoonsiga) adduunka internetka waa hab wanaagsan oo lagu yareyn karo shaqooyinka badan ee khadka tooska ah.
Ujeeddadayda Carl Henry Global waa inaan abuuro iskuxirid toos ah oo internet ka taageeri kara isla markaana socodsiin kara ganacsiyada badan isla markaana ku taageeri kara warshado kasta adoo awood u siinaya aaladda saxda ah iyo softiweerka. Waxaan maqlay moodeelkan oo loogu magac daray "is dhexgalka tooska ah", kaliya waxaan ogahay in aanan jeclayn ku tiirsanaanta dhinacyada 3rd ee horumarka.
Waxaan sidoo kale dhignay websaydh badan oo ganacsi badan! Farqiga ugu weyn ee noo dhexeeya anaga iyo "caadiga ah naqshadeeye websaydh" ayaa ah inaan fahamno noocyo ganacsi oo kala duwan oo offline ah oo aan naqshadeynno nidaamyada ganacsi ee khadka tooska ah ee adduunka ka shaqeyn doona, abuuritaanka xaashiyaha quruxda badan ee internetka aan danta noogu jirin kali kadhisan - annaga dooneysaa "Nidaamyada Ganacsi ee internetka" inay qabtaan shaqo shaqo oo ay ku caawiyaan lacag ka sameyso khadka tooska ah!
Nala Shaqeyn Us !!
Sida la sharaxay waxaan ku shaqeynaa ganacsiyo kala duwan oo si buuxda loo leeyahay waxaana wadnaa howlo gurigeenna ah, laakiin sidoo kale waxaan soo dhoweyneynaa noocyo badan oo cilaaqaad ah; tani waxay noqon kartaa shuraako la shaqeeya, tababarte, macmiil, weheliye, Joint Venture ama qandaraasle.
Fadlan nala soo xiriir Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view. si aan u aragno sida aan u wada shaqayn karno.